Ra’iisulwasaare Abdi-weli Oo Waayay 80% Kalsoonida Golaha Wasiirada - Wargeyska Faafiye
Ra’iisulwasaare Abdi-weli Oo Waayay 80% Kalsoonida Golaha Wasiirada
Wasiirro iyo wasiiru dowlayaal gaaraya ilaa 17 ayaa maanta Ra’iisulwasaaraha u jeediyay in uu is casilo si uu u dhamaado khilaafka ka dhex taagan madaxda dowladda.
Wasiir ku xigeennadaan iyo wasiiru dowlayaasha ayaa waxa ay codkooda ku biirinayaan ilaa 16 wasiir oo horay ra’iisulwasaaraha uga codsaday in uu xilka banneeyo, taas oo tirada ka dhigeysa 33 xibin oo golaha wasiirrada ku jira oo u dhiganta %80 in aysan ku qanacsaneyn in ra’iisulwasaare C/wali Sheekh Axmed uu xilka sii hayo.
Lama oga sida uu ra’iisulwasaaraha uu aqbali doono soo jeedintaan cusub isaga oo maalintii shalay ahayd ka dhaga adeygay talo tan la mid ah oo ay 16 wasiiro oo ka mid ah 25ka wasiir oo ay xukuumaddiisa ka kobantahay oo ahayd in xilka banneeyo.
Qoraal ay wasiirk ku xigeennada iyo wasiiru dowlayaashan soo saareen ayey ku sheegeen in ay go’aankaan qaateen kadib markii ay arkeen xaaladda uu dalka ku sugan yahay iyo mowshinka buuqa dhaliyay ee Ra’iisulwasaaraha ka yaallo golaha baarlamaanka.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsAfghan Vice President Fahim Qassim dies at 57.Warar sheegaya in Al-Amriki ay Alshabaab qorta ka jareen.Ingiriiska oo isaga baxay midowga Yurub.Ciidamo Ethiopian oo soo Galay GalgaduudDagaal ka dhacay gudaha gobalka J/Hoose